Meaning of Aịsaịa 41:10 N'ihi ya, anaghị atụ egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ujọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme gị ma nyere gị aka; M ga-akwagide gị na m ezi omume n'aka nri.
Home >> Igbo >> Aịsaịa 41:10 N'ihi ya, anaghị atụ egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ujọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme gị ma nyere gị
Igbo: Aịsaịa 41:10 N'ihi ya, anaghị atụ egwu, n'ihi na m nọnyeere gị; atụla ujọ, n'ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme gị ma nyere gị aka; M ga-akwagide gị na m ezi omume n'aka nri.